Numeri 33 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Rwendo rwevaIsraeri murenje (1-49)
Mirayiro yekukunda Kenani (50-56)
33 Aya ndiwo mafambiro akaita vaIsraeri pavakabuda munyika yeIjipiti+ maererano nemapoka avo*+ vachitungamirirwa naMozisi naAroni.+ 2 Mozisi akaramba achinyora nzvimbo dzavaisimuka maererano nekufamba kwavaiita murwendo rwavo achirayirwa naJehovha, uye aya ndiwo mafambiro avaiita vachibva pane imwe nzvimbo vachienda pane imwe:+ 3 Vakasimuka kuRamesesi+ mumwedzi wekutanga, pazuva rechi15 remwedzi wacho.+ Zuva chairo rakatevera Paseka,+ vaIsraeri vakabuda nechivimbo,* vaIjipiti vese vachizviona. 4 Izvi pazvaiitika, vaIjipiti vakanga vachiviga matangwe avo ese akanga aurayiwa naJehovha pakati pavo,+ nekuti Jehovha akanga atonga vanamwari vavo.+ 5 Saka vaIsraeri vakasimuka kuRamesesi vakanodzika musasa kuSukoti.+ 6 Vakabva vasimuka kuSukoti vakanodzika musasa kuEtamu,+ iri kumucheto kwerenje. 7 Vakazobva kuEtamu vakadzoka vakananga kuPihahiroti, iri pakatarisana neBhaari-zefoni,+ vakanodzika musasa pamberi peMigdhori.+ 8 Vakazobva kuPihahiroti vakapfuura nepakati pegungwa+ vachienda kurenje+ uye vakaramba vachifamba rwendo rwemazuva matatu murenje reEtamu,+ vakadzika musasa kuMara.+ 9 Vakabva vasimuka kuMara vakasvika kuErimu. KuErimu kwaiva nezvitubu zvemvura 12 nemichindwe 70, saka vakadzika musasa ipapo.+ 10 Vakazobva kuErimu vakanodzika musasa pedyo neGungwa Dzvuku. 11 Vabva paGungwa Dzvuku vakaenda vakanodzika musasa murenje reSini.+ 12 Vakasimuka kurenje reSini vakanodzika musasa kuDhofka. 13 Vakazobva kuDhofka vakanodzika musasa kuArushi. 14 Vakabva vasimuka kuArushi vakanodzika musasa kuRefidhimu,+ uko kwakanga kusina mvura yekuti vanhu vanwe. 15 Vakazobva kuRefidhimu vakanodzika musasa murenje reSinai.+ 16 Vakasimuka kurenje reSinai vakanodzika musasa kuKibroti-hataavha.+ 17 Vakabva vasimuka kuKibroti-hataavha vakanodzika musasa kuHazeroti.+ 18 Vakazobva kuHazeroti vakanodzika musasa kuRitma. 19 Vakabva kuRitma vakanodzika musasa kuRimoni-perezi. 20 Vakabva vasimuka kuRimoni-perezi vakanodzika musasa kuRibna. 21 Vakasimuka kuRibna vakanodzika musasa kuRisa. 22 Vakabva kuRisa vakanodzika musasa kuKeherata. 23 Vakazobva kuKeherata vakanodzika musasa kuGomo reSheferi. 24 Vakabva vasimuka kuGomo reSheferi vakanodzika musasa kuHaradha. 25 Vakazobva kuHaradha vakanodzika musasa kuMakiheroti. 26 Vakabva vasimuka+ kuMakiheroti vakanodzika musasa kuTahati. 27 Vakazosimuka kuTahati vakanodzika musasa kuTera. 28 Vakabva kuTera vakanodzika musasa kuMitka. 29 Vakazobva kuMitka vakanodzika musasa kuHashmona. 30 Vakabva kuHashmona vakanodzika musasa kuMoseroti. 31 Vakazosimuka kuMoseroti vakanodzika musasa kuBhene-jaakani.+ 32 Uye vakabva vasimuka kuBhene-jaakani vakanodzika musasa kuHo-hagidhigadhi. 33 Vakazobva kuHo-hagidhigadhi vakanodzika musasa kuJotbhata.+ 34 Vakazosimuka kuJotbhata vakanodzika musasa kuAbrona. 35 Vakabva kuAbrona vakanodzika musasa kuEziyoni-gebheri.+ 36 Vakazobva kuEziyoni-gebheri vakanodzika musasa kurenje reZini,+ kureva kuKadheshi. 37 Vakazosimuka kuKadheshi vakanodzika musasa kuGomo reHori,+ riri pamuganhu wenyika yeEdhomu. 38 Uye mupristi Aroni akakwira muGomo reHori arayirwa naJehovha, uye akanofira imomo, mugore rechi40 vaIsraeri vabuda munyika yeIjipiti, mumwedzi wechishanu, pazuva rekutanga remwedzi wacho.+ 39 Aroni akanga ava nemakore 123 paakafira muGomo reHori. 40 Mambo weAradhi+ wechiKenani, aigara muNegebhu munyika yeKenani, akanzwa nezvekuuya kwevaIsraeri. 41 Vakazosimuka kuGomo reHori+ vakanodzika musasa kuZarimona. 42 Vakabva vasimuka kuZarimona vakanodzika musasa kuPunoni. 43 Vakazosimuka kuPunoni vakanodzika musasa kuObhoti.+ 44 Vakabva kuObhoti vakanodzika musasa kuIye-abharimu pamuganhu weMoabhi.+ 45 Vakazobva kuIyimu vakanodzika musasa kuDhibhoni-gadhi.+ 46 Vakabva vasimuka kuDhibhoni-gadhi vakanodzika musasa kuArimoni-dhibrataimu. 47 Vakazobva kuArimoni-dhibrataimu vakanodzika musasa kumakomo eAbharimu+ pakatarisana neNebho.+ 48 Pakupedzisira vakazosimuka pamakomo eAbharimu vakanodzika musasa murenje reMoabhi pedyo naJodhani kuJeriko.+ 49 Vakaramba vakadzika musasa vakatevedza Jodhani, kubvira kuBheti-jeshimoti kusvikira kuAbheri-shitimu,+ murenje reMoabhi. 50 Jehovha akataura naMozisi murenje reMoabhi pedyo naJodhani kuJeriko, achiti: 51 “Taura nevaIsraeri uvaudze kuti, ‘Mava kuyambuka Jodhani kuti mupinde munyika yeKenani.+ 52 Munofanira kudzinga vagari vese vemunyika yacho pamberi penyu moparadza zvidhori zvavo zvese zvematombo,+ nemifananidzo yavo yese yesimbi,+ moparadza nzvimbo dzavo dzese dzakakwirira dzinoyera.+ 53 Uye muchatora nyika yacho kuti ive yenyu mogara mairi, nekuti ndichakupai nyika yacho kuti ive yenyu.+ 54 Munofanira kugova nyika yacho kumhuri dzenyu muchishandisa mujenya.+ Vanenge vakawanda, munofanira kuwedzera nhaka yavo, uye vanenge vari vashoma munofanira kuderedza nhaka yavo.+ Munhu wese achawana nhaka kunenge kwawira mujenya wake. Muchawana nhaka yenyu maererano nemadzinza emadzibaba enyu.+ 55 “‘Asi kana mukasadzinga vagari vemunyika yacho pamberi penyu,+ vaya vamunosiya vachava sezvinobaya mumaziso enyu uye seminzwa mumativi enyu, uye vachakushungurudzai munyika yamunenge muchigara.+ 56 Uye ndichakuitirai zvandakanga ndichida kuvaitira.’”+
^ ChiHeb., “maererano nemauto avo.”
^ ChiHeb., “neruoko rwakasimudzwa.”